ညီမလေးအတွက် အမကြီးပီသလှတဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ချီးကျူးနေခဲ့ရတဲ့ ဘီလီလမင်းအေး - Cele Gabar
ညီမလေးအတွက် အမကြီးပီသလှတဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ချီးကျူးနေခဲ့ရတဲ့ ဘီလီလမင်းအေး
By ChilliPosted on April 29, 2022 April 29, 2022
ပရိသတ်ကြီးရေ ဘီလီလမင်းအေးကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကမှရပ်တည်တာ တေးသီချင်းတွေလည်းထွက်ရှိထားပါတယ်။
ဘီလီကတော့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ညီမလေးအပေါ်မှာ လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ အကျင့်လေးကြောင့် ပရိသတ်တွေက ဘီလီရဲ့ အမကြီးပီသလှတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှာလည်း ဘီလီကဘွဲ့ရသွားတဲ့ ညီမလေးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကြည့်ပြီးပီတိတွေဖြစ်နေခဲ့ကာ “Congratulations ညီမလေးရေ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ညီမလေးအတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်မှုတွေတိုင်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာရသလို ညီမလေးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမြင်ရတိုင်း အမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘေးကနေ ပီတိတွေနဲ့ပေါ့ညီမလေးရေ ညီမလေးအတွက်မိသားစုအတွက် ဆက်ကြိုးစားဦးမယ်နော် အရမ်းချစ်တယ်နော်။Love You
Not everyone will understand your journey. That’s fine, it’s not their journey to make sense of It’s yours. So follow your passion. It will lead you to your purpose……” ဆိုပြီး ညီမလေးနဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ဘီလီလမင်းအေးရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဘီလီရဲ့ ညီမလေးထူးချွန်းမှုကို ဂုဏ်ပြုနေကြသလို အမဖြစ်သူရဲ့ အမပီသမှုကိုလည်း ချီးကျူးနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။
Source – Billy La Min Aye
ညီမေလးအတြက္ အမၾကီးပီသလွတဲ့ သူ႕ရဲ႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ ခ်ီးက်ဴးေနခဲ့ရတဲ့ ဘီလီလမင္းေအး
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဘီလီလမင္းေအးကေတာ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အႏုပညာေလာကမွရပ္တည္တာ ေတးသီခ်င္းေတြလည္းထြက္ရွိထားပါတယ္။
ဘီလီကေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းလွတဲ့ ညီမေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ညီမေလးအေပၚမွာ လိုေလေသးမရွိ ျဖည့္ဆည္းေပးတတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက ဘီလီရဲ႕ အမႀကီးပီသလွတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားေနခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ဒီေန႔မွာလည္း ဘီလီကဘြဲ႕ရသြားတဲ့ ညီမေလးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ၾကည့္ၿပီးပီတိေတြျဖစ္ေနခဲ့ကာ “Congratulations ညီမေလးေရ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ညီမေလးအတြက္အၿမဲတမ္းလိုအပ္မႈေတြတိုင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ဝမ္းသာရသလို ညီမေလးရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုျမင္ရတိုင္း အမတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဘးကေန ပီတိေတြနဲ႔ေပါ့ညီမေလးေရ ညီမေလးအတြက္မိသားစုအတြက္ ဆက္ႀကိဳးစားဦးမယ္ေနာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္ေနာ္။Love You
Not everyone will understand your journey. That’s fine, it’s not their journey to make sense of It’s yours. So follow your passion. It will lead you to your purpose……” ဆိုၿပီး ညီမေလးနဲ႔အတူ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ဘီလီလမင္းေအးရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ဘီလီရဲ႕ ညီမေလးထူးခြၽန္းမႈကို ဂုဏ္ျပဳေနၾကသလို အမျဖစ္သူရဲ႕ အမပီသမႈကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေနခဲ့ၾကပါေသးတယ္။
Previous post ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူ Hong In Young ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ Jeon Seung Bin ရဲ့အေဂျင်စီ
Next post Kim Go Eun နဲ့ Nam Ji Hyun တို့နဲ့အတူ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာပါဝင်လာမယ့် ‘Penthouse’ မင်းသား Uhm Ki Joon